အကောင်းဆုံးအသံပိုင်းဆိုင်ရာမျက်နှာပြင်များ၊ 3d နံရံကပ် panel များ၊ acoustic ကြွေပြားများ၊ acoustic စုပ်ယူမှု panel များထုတ်လုပ်သူများနှင့်ရောင်းချသူများ | Vinco
Acoustic ကုသမှု bass trap
ဆွဲထားသော acoustic panel များ၊ acoustic panel စျေးနှုန်း၊ အသံ ...
မျက်နှာကျက်တိမ်တိုက်များ၊ ဆိုင်းငံ့ထားသောအသံ panel
စတူဒီယိုအတွက် Wood diffuser
သစ်သားသိုးမွေးလျှပ်ကာ၊ သစ်သားသိုးမွှေး acoustic panel၊ သစ်သား ...
အစုလိုက်အပြုံလိုက်တင်ထားသောဗီနိုင်း 2lb၊ ဗီနိုင်းအကာအရံ
အသံပိုင်းဆိုင်ရာအတားအဆီး၊ acoustic ကုလားကာများ၊ acoustic စောင်
အသံပိုင်းဆိုင်ရာမျက်နှာပြင်များ၊ 3d နံရံကပ် panel၊ acoustic ကြွေပြားများ၊ acoustic စုပ်ယူမှု panel
အသံဖမ်းမျက်နှာပြင်များ၊ 3d နံရံကပ် panel၊ acoustic ကြွေပြားများ၊ acoustic စုပ်ယူမှု panel ကိုအပ်ဖြင့်အပေါက်ဖောက်ခြင်းဖြင့် ၁၀၀% polyester ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်လုံးဝရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဂေဟစနစ်ရှိ၊ စွန့်ပစ်ရေ၊ ထုတ်လွှတ်မှု၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမရှိ။ ကော်မပါ၊ acoustic panel ၏ porous သဘောသဘာဝသည်အသံစုပ်ယူမှု & အပူလျှပ်ကာကိုဖြစ်စေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ PET acoustic panel များသည်အဆိပ်အတောက်မရှိ၊ ဓာတ်မတည့်ခြင်း၊ စိတ်အနှောင့်အယှက်မရှိ၊ formaldehyde binders များမပါ ၀ င်ဘဲအသံလုံ (NRC: 0.85) ရှိသည်။
Polyester ဖိုင်ဘာ acoustic panel
Polyester ဖိုင်ဘာ acoustic panel ကို ၁၀၀% ဖိုင်ဘာဖြင့်ပြုလုပ်ပြီးဂွမ်းပုံသဏ္န်သို့အပူ ပေး၍ နှိပ်သည်။ ငါတို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောသိပ်သည်းဆကိုရရှိရန်နှင့်၎င်း၏လေ ၀ င်လေထွက်ကိုသေချာစေရန်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအသံစုပ်ယူမှုနှင့် insulating ထုတ်ကုန်များဖြစ်လာစေသည်။
ထုတ်ကုန်အမည် Polyester ဖိုင်ဘာ acoustic panel
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ ၁၀၀% အရည်အသွေးမြင့် polyester fiber
အရွယ်အစား ၁၂၂၀*၂၄၄၀*၉/၁၂ မီလီမီတာ (အခြားအထူစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်)
သိပ်သည်းဆ 160- 229kg/M3
မီးဒဏ်ခံနိုင်သည် အဆင့် B1
ပတ်ဝန်းကျင် အဆင့် E1
ထောင့်ပုံစံ Chamfer, ဖြောင့်
လျှောက်လွှာ စတူဒီယို၊ သူငယ်တန်း၊ ရုပ်ရှင်ရုံ၊ စတူဒီယိုစသည်တို့ဖြစ်သည်။
Polyester ဖိုင်ဘာ acoustic panel ပုံရိပ်များ:
Polyester ဖိုင်ဘာ acoustic panel အားသာချက်များ
၂) Eco၊ အနံ့မပါ၊ လုံခြုံစိတ်ချရပြီးသန့်ရှင်းရလွယ်ကူသည်
၃) ကောင်းသောအလှဆင်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အရောင် ၄၀ ကျော်
polyester ဖိုင်ဘာ acoustic panel ကိုလျှောက်လွှာ:
အော်ပရာအိမ်များ၊ ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားခန်းမများ၊ အသံသွင်းစတူဒီယိုများ၊ အသံလွှင့်ခန်းများ၊ တီဗီဌာနများ၊ ဘက်စုံသုံးခန်းမများ၊ အစည်းအဝေးခန်းမများ၊ ဖျော်ဖြေပွဲခန်းမများ၊ ခန်းမများ၊ အပန်းဖြေဖျော်ဖြေရေးမြို့များ၊ ဟိုတယ်များ၊ KTV စသည်ဖြင့်တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုကြသည်။
ပို့ဆောင် & ထုပ်ပိုး:
ကုန်ပစ္စည်းများကို polybags များဖြင့်ထုပ်ပိုးလိမ့်မည်
1. ကျွမ်းကျင်မှု-ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကျွမ်းကျင်သောအရောင်း ၀ န်ထမ်းရှိသည်။ မည်သည့်မေးခွန်းများကို ၂၄ နာရီအတွင်းဖြေကြားပေးလိမ့်မည်။
၃ ။ ၀ န်ဆောင်မှု-သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူပြီးအဆင်ပြေ၊ အချိန်မီပို့ဆောင်မည့်ရက်နှင့်ရောင်းအား ၀ န်ဆောင်မှုကောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကတိပြုသည်။
၁။ ၀ ယ်သူသည်စျေးနှုန်းနှင့်ထုတ်ကုန်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားအကြံဥာဏ်အချို့ပေးသောကြောင့်အလွန်ဝမ်းမြောက်သည်။
၂။ မည်သည့်မေးခွန်းမဆို ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားအီးမေးလ်သို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းဖြင့်ပထမဆုံးအသိပေးပါ။ ငါတို့ကမင်းကိုသူတို့နဲ့အချိန်မီဆက်ဆံနိုင်တယ်။
၁။ ၀ ယ်သူတရုတ်တွင်မည်သည့်အချိန်ဇယားရှိလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ ငါတို့ကမင်းဟိုတယ်ကို booking လုပ်ပြီးလေဆိပ်၊ ဒါမှမဟုတ်မီးရထားဘူတာကနေမင်းကိုကူညီချင်တယ်။
၂။ မည်သည့်ပြသနာများကိုမဆိုကျေးဇူးပြုပြီးမေးမြန်းပါ၊ ကျေးဇူးပြု၍ ငါတို့ကမင်းကိုထောက်ပံ့ဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါ့မယ်။
ယခင်: Acoustic ကုသမှု bass trap
နောက်တစ်ခု: ခေါက် partition, ခေါက် partition ကိုမြို့ရိုးကို
A. ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နမူနာများပြုလုပ်ရန် ၁ ~ ၇ ရက်ကြာလိမ့်မည်။
A. ငွေလွှဲ ၀ င်ချိန်သည်ကျွန်ုပ်တို့ငွေသွင်းပြီးနောက် ၁၅-၂၅ ရက်အတွင်းဖြစ်သည်။ ရိုးသားစွာမှာယူမှုပမာဏနှင့်သင်မှာယူသည့်ရာသီပေါ်မူတည်သည်။
A.Standard နမူနာများသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ သို့သော်စိတ်ကြိုက်နမူနာများကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကုန်ကျစရိတ်နှင့်ကုန်တင်ခပေးဆောင်ရမည်။ မှာကြားမှုကိုအတည်ပြုပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အမြန်ကြေးပြန်ပေးလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးအဲဒါကိုစိတ်ချပါ။
A: ငွေပေးချေမှု <= 1000USD၊ 100% ကြိုတင်။ ငွေပေးချေမှု> = ၁၀၀၀ USD၊ ၃၀% T/T ကြိုတင်၊ ငွေမပို့မီလက်ကျန်
မေး: OEM ကိုသင်လက်ခံနိုင်သလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ ထုတ်လုပ်သူအနေနဲ့ငါတို့မင်းရဲ့နမူနာဒါမှမဟုတ်ပုံဆွဲမှုအတိုင်းမည်သည့် acoustic panel ထုတ်ကုန်ကိုမဆိုထုတ်လုပ်ရန်မှိုကိုဖွင့်နိုင်သည်။
သင့်တွင်နောက်ထပ်မေးခွန်းရှိလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍
အလှဆင်ထားသော 3D နံရံကပ် panel များ၊ acoustic အသံလုံ၊ ...
စုပ်ယူနိုင်သော panel၊ 3d acoustic panel၊ စုပ်ယူနိုင်ခြင်း
Acoustic panel soundproofing, acoustic wall အထိ ...